Abagibeli bamabhasi e-Zimbabwe bakhala ngokuhlukunyezwa | Scrolla Izindaba
Abagibeli bamabhasi e-Zimbabwe bakhala ngokuhlukunyezwa
The scourge of the bus ticket touts
via @ScrollaAfrica #RealNewsForMobile#travelling #Busscourge #Zimbabwe #Harare pic.twitter.com/BkmqqCgdm1
— Scrolla Africa (@ScrollaAfrica) March 25, 2021
Ukuvakashela abangani kanye nomndeni kuhlale kuyintokozo – kodwa ukuya e-Zimbabwe ngezithuthi zomphakathi akunjalo!
Njengoba i-Zimbabwe yaziwa ngemithetho yayo enzima kanye namaphoyisa angawuvumeli umbhedo, uhulumeni wase-Harare ubukeka ehlulwa empini yokulwa nalabo abathatha amathikithi kanye nezigebengu ezihlukumeza abahamba ngamabhasi ezweni lonke.
Ividiyo esabalale ezinkundleni zokuxhumana ezehlukene ikhombisa owesimame esikhumulweni samabhasi ehlaselwa ngabantu abathatha amathikithi abebemphusha nemithwalo yakhe.
Bathathe ngenkani imithwalo yakhe bayifaka kwelinye lamabhasi ngaphandle kwemvume yakhe.
Ibhasi libheke e-Chipinge, idolobha elisempumalanga yezwe eduze komngcele wase-Mozambique.
Ngisho esekhala owesifazane ngokuphelelwa yithemba, baqhubekile nokumphusha ngenkathi ababukeli behleka.
Ukuhlukumeza abagibeli kuyinto ejwayelekile ezweni njengoba abashayeli bamabhasi belwela abagibeli.
UJames Mafirakureva, wase-Zimbabwe ozinze e-Humansdorp, e-Eastern Cape, ohlela ukuya ekhaya ngePhasika, utshele abakwa-Scrolla.Afrika ukuthi le vidiyo iyamethusa.
“Ngifelwe yimoto ngakho-ke ngizosebenzisa amabhasi,” kusho uJames.
“Leyo vidiyo iletha izinyembezi kimi. Ikakhulukazi ngezimpelasonto ezinde nangamaholidi baphoqa abagibeli ukuba baye emabhasini abo futhi bathathe imithwalo yabo bese bebakhokhisa.”
Uthe abantu abaningi balahlekelwa yizimpahla zabo, imali kanye nezinto ezibalulekile.
“Bavame ukuhlukumeza abesifazane kanye nezingane,” kusho uJames.
“Amaphoyisa kufanele abe namandla okucabanga nokuziphatha ngendlela eyamukelekayo esikhumulweni sethu samabhasi.”
Abenhlango ye-Zimbabwe National Organisation of Associations and Residents Trust basigxekile lesi senzo.
“Sifuna ukuthi amaphoyisa abophe lezi zigilamkhuba,” kusho isitatimende.
“Sikuqaphele lokhu kuhlukunyezwa okwenzeka kuzo zonke izikhumulo zamabhasi emadolobheni ezweni lonke. Lokhu kuhlukunyezwa kuhamba nokuthukwa ikakhulukazi kwabesifazane abangakwazi ukuzivikela.”
Bathe kufanele kuboshwe labo abathatha amathikithi ukuze kuncishiswe ukuhlukunyezwa esikhumulweni samabhasi.